မွနျမာနိုငျငံရောကျ အမရေိကနျနိုငံသားမြား ပွညျတျောပွနျ အစီအစဉျ - Logistics Guide
Credit အေးဝါလှိုင်, MRTV
မွနျမာနိုငျငံမှာ ရောကျရှိနတေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံသားမြားကို ကယျထုတျမယျ့ အစီအစဉျကို ဧပွီလ ၁ ရကျနကေ့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ အမရေိကနျသံရုံးအနဖွေငျ့ ပွနျလညျချေါယူတဲ့ လကွေောငျးခရီးစဉျကို ရနျကုနျမွို့မှ စတငျစမှောဖွဈပွီး လာမယျ့ သီတငျးပတျအတှငျးမှာ ဆောငျရှကျမှာ ဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံသို့ ပွနျလိုသူမြားအတှကျသာ ဖွဈပွီး အမရေိကနျနိုငျငံရှိ မညျသညျ့ လဆေိပျသို့ ပို့ဆောငျမယျဆိုတာ မဆုံးဖွတျရသေးကွောငျးကိုလညျး အသိပေးထားပါတယျ။
ပွနျချေါယူတဲ့ ခရီးစဉျမှာ လိုကျပါမညျ့ ခရီးသညျမြားကို အခမဲ့ ပို့ဆောငျပေးမှာ မဟုတျဘဲ မွနျမာမှ အမရေိကနျသို့ ပွနျလြှငျ စီးကွသညျ့ လကွေောငျးလိုငျးမြားမှ ကောကျခံတဲ့ နှုနျးထားဖွငျ့ လယောဉျစီးခ ကောကျခံမယျလို့လညျး ဖျောပွထားပါတယျ။
ထိုသို့ ချေါယူခွငျးကို တဈကွိမျသာ ဆောငျရှကျပေးမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး ဖျောပွထားပါတယျ။ ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးမှာ အဆိုပါ ခရီးစဉျကို ဆောငျရှကျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ရှိ အမရေိကနျသံရုံး Facebook တှငျ ယခုလို ဆုမှနျကောငျးတောငျးပွီး ကြေးဇူးတငျစကား မွနျမာ အင်ျဂလိပျ နှဈဘာသာဖွငျ့ တငျပွထားပါတယျ။
တဈခါမြှမကွုံဖူးသော ယခုကဲသို့ အခကျအခဲ ကာလအတှငျး နရေပျပွနျကွသူ အမရေိကနျနိုငျငံသားမြားနှငျ့ အမရေိကားတှငျ နထေိုငျသူ ၂၆၇ ဦးကို အမရေိကနျသံရုံးက ယနအေ့ကူအညီမြားပေးအပျခဲ့ပါသညျ။ အမရေိကနျအစိုးရက စီစဉျပေးသော လယောဉျဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှ ပွနျလညျထှကျခှာသှားကွသူမြား စိတျ၏ခမျြးသာခွငျး၊ ကိုယျ၏ကနျြးမာခွငျးဖွငျ့ ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးစှာ အိမျပွနျရောကျကွပါစကွေောငျး မိမိတို့ဆုမှနျကောငျးတောငျးပါသညျ။ ဤလယောဉျခရီးစဉျအဆငျပွခြေောမှစေ့ရေေးအတှကျ အကူအညီပေးအပျကွသော မွနျမာအာဏာပိုငျမြားကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံသားမြားအတှကျလညျး အမရေိကနျသံရုံးသညျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ တုံ့ပွနျတိုကျဖကျြရေးအတှကျ မွနျမာနိုငျငံကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ရပျရှာလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အတူ အနီးကပျလကျတှဲ၍ တဈစိုကျမတျမတျဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ။ ရနှေငျ့ကနျြးမာသနျ့ရှငျးရေးအထောကျအပံ့ပစ်စညျးမြား၊ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျမှုစီမံခနျ့ခှဲရေး၊ ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုရေး၊ ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့မြားစှာသော ကိစ်စမြားအပါအဝငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါတုံ့ပွနျတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ဒျေါလာ ၃.၈ သနျးအကူအညီပေးရနျ အမရေိကနျနိုငျငံတကာဖှံ့ဖွိုးရေးအဂေငျြစီကလညျး မကွာသေးမီက ကတိကဝတျပွုခဲ့ပါသညျ။ နိုငျငံတဈဝနျးရှတေ့နျးမှဆောငျရှကျနကွေသော ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားအတှကျလညျး နညျးပညာအကူအညီမြားကို အမရေိကနျရောဂါထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ကာကှယျတားဆီးရေးဗဟိုဌာန (CDC) ကဆကျလကျပေးအပျနပေါသညျ။ ဤအကူအညီမြားအားလုံးသညျ ကနျြးမာရေးကဏ်ဍအကူအညီအတှကျ ဒျေါလာ ၁၇၆ သနျးကြျောထညျ့ဝငျသုံးစှဲ၍ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးကနျြးမာရေးကဏ်ဍအပျေါ ကာလရှညျကွာထားရှိထားသော မိမိတို့ကတိကဝတျ၏ အစိတျအပိုငျးတဈရပျဖွဈပါသညျ။
ဘေးကငျး၍ကနျြးမာအောငျမညျသို့နထေိုငျရမညျ့အကွောငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ အားလုံးနိုးနိုးကွားကွား နထေိုငျကွရနျကိုလညျး မိမိတို့တိုကျတှနျးနိုးဆျောအပျပါသညျ။
Today, the U.S. Embassy helped 267 American citizens and residents return home during this time of unprecedented challenges. To those who departed Myanmar onaU.S. government-organized flight, we wish youasafe and healthy return home. Thank you to the Myanmar authorities for facilitating this flight.
To the people of Myanmar, the U.S. Embassy remains committed to working closely with the Ministry of Health and Sports and communities to respond to COVID-19. Recently, USAID committed $3.8 million for COVID-19 response, including for water and sanitation supplies, COVID-19 case management, disease surveillance, coordination, and more. CDC continues to provide technical assistance to frontline health workers across the country. All of this is part of our long-standing commitment to health in Myanmar, where we have invested more than $176 million in health assistance.
We encourage everyone to stay informed on how to remain safe and healthy.
မြန်မာနိုင်ငံရောက် အမေရိကန်နိုငံသားများကို ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကို ကယ်ထုတ်မယ့် အစီအစဉ်ကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးအနေဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့ လေကြောင်းခရီးစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့မှ စတင်စေမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်းမှာ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လိုသူများအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ မည်သည့် လေဆိပ်သို့ ပို့ဆောင်မယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါတယ်။
ပြန်ခေါ်ယူတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါမည့် ခရီးသည်များကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာမှ အမေရိကန်သို့ ပြန်လျှင် စီးကြသည့် လေကြောင်းလိုင်းများမှ ကောက်ခံတဲ့ နှုန်းထားဖြင့် လေယာဉ်စီးခ ကောက်ခံမယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုသို့ ခေါ်ယူခြင်းကို တစ်ကြိမ်သာ ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး Facebook တွင် ယခုလို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီး ကျေးဇူးတင်စကား မြန်မာ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် တင်ပြထားပါတယ်။
တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသော ယခုကဲသို့ အခက်အခဲ ကာလအတွင်း နေရပ်ပြန်ကြသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် အမေရိကားတွင် နေထိုင်သူ ၂၆၇ ဦးကို အမေရိကန်သံရုံးက ယနေ့အကူအညီများပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရက စီစဉ်ပေးသော လေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသူများ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အိမ်ပြန်ရောက်ကြပါစေကြောင်း မိမိတို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါသည်။ ဤလေယာဉ်ခရီးစဉ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် အကူအညီပေးအပ်ကြသော မြန်မာအာဏာပိုင်များကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်လည်း အမေရိကန်သံရုံးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အနီးကပ်လက်တွဲ၍ တစ်စိုက်မတ်မတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရေနှင့်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်များစွာသော ကိစ္စများအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၃.၈ သန်းအကူအညီပေးရန် အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီကလည်း မကြာသေးမီက ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှေ့တန်းမှဆောင်ရွက်နေကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း နည်းပညာအကူအညီများကို အမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဗဟိုဌာန (CDC) ကဆက်လက်ပေးအပ်နေပါသည်။ ဤအကူအညီများအားလုံးသည် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအကူအညီအတွက် ဒေါ်လာ ၁၇၆ သန်းကျော်ထည့်ဝင်သုံးစွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ် ကာလရှည်ကြာထားရှိထားသော မိမိတို့ကတိကဝတ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဘေးကင်း၍ကျန်းမာအောင်မည်သို့နေထိုင်ရမည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အားလုံးနိုးနိုးကြားကြား နေထိုင်ကြရန်ကိုလည်း မိမိတို့တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။